सीमामा आएपछि आत्तिँदै फोन गर्छन्, केही साेच्न सक्दिनः कचनकवल गाउँपालिका अध्यक्ष आलम खबरमञ्च
सीमामा आएपछि आत्तिँदै फोन गर्छन्, केही साेच्न सक्दिनः कचनकवल गाउँपालिका अध्यक्ष आलम
८ जेठ, गाैरव पाेखरेल, at 8:29 PM
By खबर मञ्च / May 21, 2020 / Comments Off on सीमामा आएपछि आत्तिँदै फोन गर्छन्, केही साेच्न सक्दिनः कचनकवल गाउँपालिका अध्यक्ष आलम
Photo: Ishma Media Agency
झापामा बिहीबार ८ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । यसअघि जिल्लामा २७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको थियो । तीमध्ये दुई जना दमक नगरपालिका र बाह्रदशी गाउँपालिकाका थिए, जो निको भएर घर फर्किसकेका छन् ।
बाँकी ३३ जना संक्रमित झापाका कचनकवल गाउँपालिकाका हुन् । र, उनीहरु सबै भारतका विभिन्न जिल्लाबाट आएका मजदुर हुन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष अञ्जार आलम भन्छन्, ‘भारतमा काम रोकिएपछि खानै पाएन भन्दै गाडीमा कोचिएर सीमासम्म आइपुगेपछि हामी पनि व्यवहारिक समस्यामा पर्यौं ।’
सीमामा हरेक व्यक्ति नेपाल छिर्ने वित्तिकै जनप्रतिनिधि र प्रहरीले क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरेका थिए । जसका कारण अहिले कचनकबलको समुदायमा त संक्रमण फैलिएको छैन तर, क्वारेन्टाइनमा पनि पूर्ण रुपमा सामाजिक दूरी कायम नहुँदा जोखिम बढ्दो छ ।
‘हामीले दूरी कायम गरेर सुत्ने गरी व्यवस्थापन गरेका छौं’, आलम भन्छन्, ‘तर, खाना खान जाने भने ब्रस गर्न जाने वेला सबै हुर्रिएर जान्छन् । सामाजिक दूरी व्यक्ति आफैंले पनि पालना गर्नुपर्ने हो, हामीले बाहिरबाट कति भन्नु ?’
उनै अध्यक्ष आलमले झापाका कोरोना संक्रमितबारे गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तत गरेको छुः-
कचनकवल गाउँपालिकामा ४६ किलोमिटर खुला सीमा छ । कोरोनाको महामारीपछि चार सय मिटरको दूरीमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली बसेको छ । सुरक्षाकर्मीको २४ सै घन्टा ड्यूटी हुने गरेको छ ।
रोटेसनका आधारमा खटिएको टोलीलाई राति काम गर्न लाइटको पनि व्यवस्था गरेका छौं । हाम्रो गाउँपालिकाबाट मजदुरीका लागि भारतको विभिन्न ठाउँमा जाने चलन छ । कोही पञ्जाब गएर धान काट्छन्, कोही बम्बई र दिल्लीका रेष्टुरेन्टर अन्य मजदुरीका क्षेत्रमा काम गर्छन् ।
भारतका मजदुरले कामबाट निकालिदिएपछि उनीहरु समस्यामा परेछन् । अधिकांश काम गर्ने ठाउँ बन्द छन् । त्यहाँ बसिरहँदा खानै समस्या हुने भएपछि जेजे भेटिन्छ, त्यसमा चढेर सीमासम्म आएछन् । कोही गाडीमा कोचिएर आएका छन् । कोही पैदलै हिँडेका छन् । कोही भारतले रेल सेवा सुरु गरेपछि चढेर आएका छन् ।
खासमा उहाँहरुलाई भारतले नै राख्नुपर्ने हो । तर, त्यहाँबाट सुरक्षाकर्मी आफैंले पनि पठाइदिँदा रहेछन् । त्यति गर्दा पनि हामीलाई जानकारी गराइदिए हुन्थ्यो । पारि किसनगञ्ज छिरेपछि मात्र हामीलाई एकैचोटी खबर गर्दा समस्या हुन्छ ।
सीमामा आइसकेपछि मात्र आमाबुबाहरुले आत्तिँदै फोन गर्छन् । हामी त बारम्बार छोराछोरीलाई अब नबोलाउनुस् भनेर माइकिङ गर्छौं । जो जहाँ छौं, त्यही सुरक्षित बस्नुपर्छ भन्छौं । तर, उहाँहरुको भनाइ पनि छोराछोरी भोकै छ भन्ने हुन्छ । उहाँहरुको कुरा सुनेपछि हामीलाई पनि के गर्ने भन्ने हुन्छ । एकदमै व्यवहारिक समस्या देखिएको छ ।
त्यसैले सीमामा आइपुगेको व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी प्रवेश दिन थाल्यौं । सीमामा ज्वारो नाप्ने व्यवस्था गरेका थियौं । तर, अधिकांश संक्रमितलाई ज्वरो रहेनछ । फेरि सीमामा दैनिक ४० देखि ५० जना आउने भएकाले प्रहरीलाई पनि नजिक जान गाह्रो भयो । खटिने सबै प्रहरीलाई पनि जोखिम छ ।
सीमामा १६० बढी सुरक्षकर्मी छन्, सबैलाई पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्यूपमेन्ट (पीपीई) दिन सकेका छैनौं । हामीले दुई ठाउँबाट मात्र छिर्न दिएकाले पनि संख्या धेरै छ । यद्यपि, हाल संख्या घट्दो क्रममा छ ।
अहिलेसम्म हाम्रो गाउँपालिकामा २५ जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । भर्खरै ८ जना पनि थपिए । अब सीमामा थप कडाइ र सतर्कता अपनाउँछौं ।
हाल लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा माविमा ६५, महेन्द्ररत्न माविमा ९५, जानकी माविमा ४० जना र पथरिया माविमा २३ जना व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा छन् । सुरुमा हामीले ३५ जना र दोस्रो पटक ६५ जनाको परीक्षण गराएका थियौं । सबैको रिपोर्ट अझै आइसकेको छैन ।
पहिले दुबई, कतारबाट फर्किएकालाई पनि क्वारेन्टाइनमा राखेका थियौं । तर, उहाँहरुमा संक्रमण देखिएन । भारतबाट आउनेमा भने संक्रमण देखिएको छ । यसले गाउँमा पनि त्रास बढाएको छ । गाउँमा संक्रमण नफैलियोस् भनेर सचेत छौं । त्यसैले क्वारेन्टाइनमा उहाँलाई राखेका छौं ।
यसको व्यवस्थापनका लागि वडाध्यक्षको नेतृत्वमा समिति पनि बनाएका छौं । तर, क्वारेन्टाइनमा पनि उहाँहरु जति संयमित हुनुपर्ने हो, त्यति हुनु भएको छैन । हामीले सामाजिक दूरी कायम गरेर सुत्ने ठाउँ वेग्लावेग्लै बनाएका छौं । तर, दात माझ्ने, खाना खाने समयमा उहाँहरु एकैपटक हुर्रिएर जानु हुन्छ । यसले समस्या सिर्जना गरेको छ । यद्यपि, व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।
हामीले बाहिरबाट माइकिङ गरिरहने भित्र उहाँहरुले पालना नगरिदिने हो भने यसको अर्थै रहँदैन । उहाँहरु आफैं पनि अब सचेत बन्नुपर्छ । अहिलेको जटिल परिस्थितिलाई हेरेर हामीले सबैलाई संक्रमितको नजरबाट हेरेका छौं र सोही अनुसार सतर्कता अपनाएका छौं ।
Published:7months ago on May 21, 2020
Last Modified: May 22, 2020 @ 7:49 am
इद-उल-फित्रमा सार्वजनिक विदा दिने सरकारको निर्णय
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा समय आधा घटायो
कसरी खुल्यो दुई एसपीको असुली धन्दा ?
अब ओलीले उठाउने कदम कस्ता होलान् ?
एन्टिजेन विधिबाट स्वाब परीक्षण गरिएकामध्ये ८ प्रतिशतमा कोरोना संक्रमण
काठमाडौं । नेपालबाट सरकारी प्रयोगशालाको पीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट बोकेर नेपाल …
काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आन्तरिक …
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तर (एमए) को अन्तिम परीक्षा अब …
काठमाडौं। नेपाल प्रहरीका एसपी रामेश्वरप्रसाद यादव रूपन्देहीमा डीएसपी दर्जामा कार्यरत …
अर्जेन्टिनाका लेजेण्ड फुटबलर डिएगो म्याराडोनाको निधन
भारतले लगायाे चिनियाँ ई-कमर्स एप अलिएक्सप्रेसमा प्रतिबन्ध
भारतीय हास्य कलाकार भारती सिंहकाे घरमा छापा
बेलायतका प्रधानमन्त्री जोनसन पुनः ‘सेल्फ आइसोलेसन’मा
हिरासतमा माेबाइल चलाएपछि जेल पठाइए अर्नब गोस्वामी
मेचीनगर ४ का प्रधानको हत्या, रातारात पक्राउ परे अभियुक्त
ठगी आरोपमा पक्राउ परेका न्यौपानेलाई एक साता हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले दियो अनुमति
नेपाल प्रहरीका दुई एसपी र एक इन्स्पेक्टर निलम्बनमा, अनियमितताको आरोपमा